Dowladda federaalka oo maanta ciidamo hor leh ka dejisay degmo ka tirsan G/Gedo – Hornafrik Media Network
Dowladda federaalka oo maanta ciidamo hor leh ka dejisay degmo ka tirsan G/Gedo
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dawlada federaalka Soomaaliya ay mar kale diyaarado ciidamo ku gaysay magaalada Beled-Xaawo ee gobolkaasi Gedo.
Ciidamada ay geysay dawladdu magaalada Beled-Xaawo ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan ciidamo boolis iyo militeri isugu jira, kuwaas oo horay u joogay Beled-Xaawo, degmooyin iyo deeganno kale oo ka tirsan gobolka Gedo.
Beled-Xaawo waxaa maanta laga dareemayaa dhaq-dhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gor-Gor , kuwo ka tirsan militeriga Soomaaliya iyo kuwo boolis ah oo isugu jiray Haramcad iyo kuwo horay u joogay gobolka, waxayna saraakiishu sheegeen in dhaq-dhaqaaqyadaas ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada Beled-Xaawo.
Dhinaca kale magaalada Mandheera ayaa waxaa ku sugan ciidamo si gaar ah uga amar qaata wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana jirta cabsi laga qabo in ay isku dhacaan ciidamada ay dawladdu geysay muddooyinka gobolka Gedo iyo kuwan Jubbaland.
Kenya oo la wareegtay gadiid loo weday dalal ay ku jirto Soomaaliya
Mareykanka oo cambaareeyey dilkii Weriye Cabdiweli Cali Online